Bodegas Navarro López - A na-eme anyị na Spain
E Dere 7 January, 2019 16 February, 2019 By HB
N'obodo Valdepeñas, na Ciudad Real, bụ Bodegas Navarro López dị afọ 100. A mụrụ dị ka azụmahịa ezinụlọ, ọ bụ na njedebe nke 80 mgbe a na-azụ ya site n'aka onyeisi oche nke ugbu a, na-enye nnukwu mgbanwe na iwu nke winery na ịkụ nzọ tumadi na àgwà na exclusivity. Ndị ọsụ ụzọ nke ugbu a na-ekwu na Valdepeñas, Bodegas Navarro López na-akwado nkwa dị ugbu a maka nlekọta gburugburu ebe obibi na ọdịnala.
Na mmepe nke Vinos de Castilla dị ka ebumnuche ya, nke a na-emepụta ihe na-enye mmanya site n'akụkụ ndị ọzọ na iche iche. Enwere ike ịchọta mmanya si na mmanya a Nkọwa nke mmalite nke Rioja o Ribera del Duero.
Bodegas Navarro López dị n'akụkụ nke hectare ubi vaịn.
Nke a na-enweta ọgwụgwọ dị mma nke mkpụrụ vaịn, na-ebelata oge site na mgbe a na-egbute ya ruo mgbe a ga-emebi ya ma kwụsị. Mpaghara mpaghara ebe ubi vine na-etolite bụ nke Mee Valdepeñas, nke na-enye nuances na aromas maka mkpụrụ vaịn nke na-egosipụta n'ụzọ doro anya àgwà nke mpaghara pụrụ iche maka ịkụ mkpụrụ nke a. Ihe karịrị 300 ụbọchị nke anwụ na-acha kwa afọ, ma ọ bụ ịkụ mkpụrụ vaịn na ala ụrọ na ụfọdụ ndị na-eme nri, na-enye echiche nke ịgha mkpụrụ kwesịrị ekwesị maka mkpụrụ vaịn, si otú ahụ nweta ụdị mmanya na-edozi iche na mmanya pụrụ iche.
Udi Don Aurelio mmanya nke ndị a wineries pụtara, nke bụ ihe ịrịba ama nke àgwà na ọnụahịa price:
Don Aurelio Rosado Ọ bụ mmanya zuru oke iji soro klas mbụ, akwụkwọ nri, osikapa, pasta, wdg. Mmiri na-egbuke egbuke, na-ewepụta strawberry na utu ọka aromas, nke na-enye aka mkpụrụ na-atọ ụtọ. Ije ozi na okpomọkụ kachasị mma (8 - 10 degrees) mmanya a na-apụta maka ịdị ọhụrụ na àgwà ya. A ga na mmanya rosé si Spain.
Don Aurelio Tempranillo Ọ bụ nke mbụ nke mmanya uhie nke ika. Ọ na-apụta maka usoro ya dị mfe, nke na-enye anyị ohere ịmịchaa aromas niile nke mkpụrụ vaịn a ma ama na Castilla La Mancha. Nuances nke mkpụrụ osisi na-acha uhie uhie na nnukwu caramel. A na-atụ aro ka a jikọta ya maka ụdị anụ uhie, ụgbụ na mmiri vaịn.
Don Aurelio Crianza bụ otu n'ime kpakpando nke ika ahụ. Na-eme ka mkpụrụ osisi 12 dị na ọkọlọtọ oak French. Aromas nke acha uhie uhie mkpụrụ, mara mma ma na-akwa cherry-acha uhie uhie agba. Nhọrọ dị mma iji jikọta ya na anụ ndị na-acha uhie uhie, pates na ụdị dị iche iche dị ike.
Don Aurelio Verdejo bụ mmanya ọcha nke ika. Balsamic na floral nuances nke na-esiwanye ike na-agafe na aromas okpomọkụ na mkpụrụ osisi ọcha. Mkpụrụ okpomọkụ dị mma nke oriri, n'etiti 6 na 8 degrees, na-eme ka ọ bụrụ nke zuru okè iji soro azụ, nri mmiri, osikapa na mmiri vaịn ọhụrụ. Awarded with two medal gold medals at FERCAM. Ike niile nke Grape Verdejo na ihe mara mma nke Castilla.
Obi abụọ adịghị ya na Bodegas Navarro López na-emeziwanyewanye site n'afọ ruo n'afọ, ọ dịkwa mma ka ha ṅaa ntị nke ọma.
tagged: Bodegas Navarro López/Mmanya si Valdepeñas/Mmiri Red/Mmanya si Spain
Next post: Mkpụrụ vine na-eji ifufe eme ihe n'àgwàetiti ọzara na Richard Branson